Didier Ratsiraka Miandry azy ny ao Toliara
Farihin’Anosy Zaza herintaona saika hovonoin-dreniny
Nitrangana toe-javatra nampalahelo tetsy amin’ny ranon’Anosy omaly talata 16 janoary maraina tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany.
Kaominin’i Mahitsy Misy tsy mirindra ny fandaminan’asa
Hitarainan’ny vahoaka eny amin’ny kaominin’i Mahitsy an-tampon-tanàna ny fandaminan’asa tsy mirindra eo anivon’ity tanàna ity.
Taorian�i Fianarantsoa dia ny tan�nan�i Toliara indray no handray ny fankalazana ny faha-40 taonan�ny antoko AREMA.
Efa natomboka tamin’ny fampirantiana sary miisa 350 mampiseho ny fiainan’ny Amiraly Didier Ratsiraka mpanorina ny antoko, mandritra ny 40 taona izay, nanomboka ny talata 06 desambra ao amin’ny hotely Blanc Vert ao Sanfily ny hetsika. Mampiavaka ity ao Toliara ity ny fampisehona ny akanjo nanaovan’Atoa Amiraly Didier Ratsiraka tamin’ny nandraisany ny fahefana tamin’ny taona 1975 fony izy “Capitaine de Frégate”. Nanokatra ny fampirantiana ny lehiben’ny Faritra Atsimo Andrefana, kolonely Rabe Jules amin’ny maha oloben’ny tanàna azy notronin’ny Sekretera nasionaly lefitry ny antoko Arema, Rabeharison Jeannot sy ny “Comité directeur” isany Valoserana Eloi sy Saory Christian ary Ramanana René ary ny zanany vavy Sophie Ratsiraka. Hisy fifaninanana “Tsapiky” anio zoma 9 desambra 2016. Manomana fitsenana miavaka an’ny Amiraly Didier Ratsiraka amin’ny fahatongavany eny amin’ny seranam-piaramanidina Andranomena ny ao Toliara rahampitso sabotsy 10 desambra 2016. Harahina karnavaly manodidina ny tanàna izany mihazo ny Espace Père Barre hanaovana ny lanonam-pankalazana ny faha-40 taonan’ny antoko. Io ihany koa no fotoana hihaonan’ny amiraly amin’ny vahoakan’i Toliara indray taorian’ny taona 2002, nialany an-tanindrazana.